Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်)
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Escitalopram သည် selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) ဟုခေါ်သည့် ဆေးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ Escitalopram အား စိတ်ကျခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ခြင်းများအား ကုသရာတွင် သုံးနိုင်သည်။ Escitalopram ၏အလုပ်လုပ်ပုံမှာ တစ်ချို့သော သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်သည့် (serotonin) အား ဦးနှောက်ထဲတွင် ညီမျှအောင် ထိန်းရာတွင် ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ Escitalopram သည် သင်၏စွမ်းအင်လယ်ဗယ်ကို တိုးတက်စေပြီး ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေကာ စိတ်လှုပ်ရှားပူပန်ခြင်းအား လျော့ချပေးပါသည်။
တခြားအသုံးများ – ယခုဖော်ပြပါအပိုင်းသည် စာရင်းမပြုစုထားသော်လည်း သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူမှ ပေးနိုင်သည့် ဆေးအသုံးများဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီ၍ ဆေးသုံးမည်ဆိုပါက သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူညွှန်မှ အသုံးပြုပါ။
Escitalopram ကို တခြားသော စိတ်ပိုင်း/ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ (အစွဲလမ်းလွန်စိတ်ရောဂါ OCD၊ အကြောက်လွန်ရောဂါ panic disorder) နှင့် သွေးဆုံးချိန်တွင်ဖြစ်တတ်သည့် အပူပြန်သည့်ဖြစ်စဉ်များတွင်လဲ သုံးကောင်းသုံးရနိုင်ပါသည်။
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Escitalopram အား ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသလို အစာနှင့်တွဲလျက် သို့မဟုတ် မတွဲပဲ ပါးစပ်မှသောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မနက် သို့မဟုတ် ညနေ တစ်ရက်တစ်ခါသာ သောက်သုံးရမည်။ ဆေးပမာဏသည် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်၏။ ကုသမှုအားတုန့်ပြန်မှု၊ အသက်အရွယ်နှင့် သင်သောက်နေသည့် တခြားသောဆေးများပေါ်လဲ မူတည်ပါသည်။ သင်၏ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား သင်သုံးနေသည့်အရာများအားလုံး (ညွှန်ထားသည့်ဆေးများ၊ မညွှန်ထားသည့်ဆေးများ၊ အပင်ထွက်ဆေးများ)ကို သေချာပြောပြပါ။
Escitalopram အား အရည်ပုံစံနှင့်အသုံးပြုပါက အထူးတိုင်းတာသည့်ပစ္စည်း/ဇွန်း ဖြင့် ပမာဏကို သေချာချိန်ပါ။ အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးပါနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပမာဏမှန်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းစေရန် သင့်ဆရာဝန်မှ ပမာဏနည်းနည်းမှစသောက်စေပြီး တဖြည်းဖြည်းပမာဏတိုးရန် လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အား သေချာလိုက်နာပါ။ ဆေးကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပမာဏတိုးခြင်း၊ အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ညွှန်ထားသည့်ရက်ထက် ပိုသောက်ခြင်းများကို မလုပ်ရပါ။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးပိုကောင်းမလာသလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလဲ ပိုခံရနိုင်ပါသည်။ Escitalopram ကို အာနိသင်ကောင်းစေရန် မှန်မှန်သောက်သုံးပါ။ ဆေးသောက်ဖို့မှတ်မိစေရန် Escitalopram ကို နေ့စဉ်တူညီသောအချိန်မှာ သောက်ပါ။
သင်ကျန်းမာရေးကောင်းသလို စခံစားလာရပြီဆိုရင်တောင်မှ ဆေးကိုဆက်သောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်မတိုင်ပင်ပဲ Escitalopram သောက်ခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။ ဆေးအားရုတ်တရတ်ရပ်လိုက်လျှင် တချို့သောအခြေအနေများမှာ ပိုဆိုးဝါးသွားနိုင်သည်။ ထို့အတူ သင့်၌ လက္ခဏာအသစ်များဖြစ်သည့် ခံစားမှုပြောင်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အိပ်ချိန်ပြောင်းခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်သလို ခဏတာခံစားမှုမျိုးအား ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ဆေးရပ်သည့်အခါ ဒီလက္ခဏာများအား ကာကွယ်နိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်မှ ဆေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ပေးပါလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။ လက္ခဏာများ အသစ်ပေါ်လာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ချက်ချင်းပြောပါ။
ဆေးအာနိသင်ပြရန် တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်ထိလိုနိုင်ပါသည်။ Escitalopram ၏အာနိသင် အပြည့်အဝရရှိရန် ၄ ပတ်လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးမတိုးတက်လာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Escitalopram ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Escitalopram ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Escitalopram ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
escitalopram အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
• Escitalopram၊ citalopram (Celexa) သို့မဟုတ် တခြားသောဆေးများနှင့် မတည့်တာရှိလျှင် ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြောပါ။
• pimozide (Orap) သို့မဟုတ် monoamine oxidase (MAO) inhibitor ဖြစ်သော isocarboxazid (Marplan)၊ phenelzine (Nardil)၊ selegiline (Eldepryl၊ Emsam၊ Zelapar) နှင့် tranylcypromine (Parnate) ဆေးများ သောက်သုံးနေလျှင်၊ MAO inhibitor အား လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ ရက်လောက်ကမှ ရပ်ထားလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ Escitalopram သောက်သုံးမှုရပ်မည်ဆိုပါက အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်ခြားပြီးမှသာ MAO inhibitor ကို စသောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
• Escitalopram သည် တခြားသော SSRI၊ citalopram (Celexa) နှင့် ဆင်ဆင်တူသည်ကို သိထားရမည်။ ဒီဆေးနှစ်မျိုးအား အတူတွဲမသောက်ရပါ။
• ညွှန်ကြား၍သောက်သည်ဖြစ်စေ မညွှန်ကြားပဲသောက်သည်ဖြစ်စေ ဆေးများ ဗီတာမင်များ သုံးနေပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။ အောက်ပါတို့သုံးနေလျှင် ပြောဖြစ်အောင် ပြောရပါမည်။ သွေးမခဲဆေးများ (‘သွေးကျဲဆေးများ’) ဥပမာ warfarin (Coumadin)၊ antihistamines၊ aspirin နှင့် တခြားသော စတီးရွိုက်မပါသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ (nsaids)များ ဥပမာ ibuprofen (Advil၊Motrin) နှင့် naproxen (Aleve, Naprosyn)၊ carbamazepine (Tegretol)၊ cimetidine (Tagamet)၊ ketoconazole (Sporanox)၊ lithium (Eskalith၊ Lithobid၊ Lithotabs)၊ linezolid (Zyvox)၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းနှင့် စိတ်ရောဂါများအတွက် သို့မဟုတ် အတက်ရောဂါအတွက် သုံးသော ဆေးများ ၊ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်းအတွက် သုံးသောဆေးများ ဥပမာ almotriptan (Axert)၊ eletriptan (Relpax)၊ frovatriptan (Frova)၊ naratriptan (Amerge)၊ rizatriptan (Maxalt)၊ sumatriptan (Imitrex)နှင့် zolmitriptan (Zomig)၊ metoprolol (Lopressor, Toprol XL)၊တခြားသော စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ ဥပမာ desipramine (Norpramin)၊ sedatives၊ sibutramine (Meridia)၊ အိပ်ဆေးများ၊ tramadol၊ methylene blue၊ နှင့် စိတ်ငြိမ်ဆေးများ။ သင်၏ဆရာဝန်သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နည်းစေရန်အတွက် ဆေးပမာဏကိုချိန်ညှိပြီး သင့်အားစောင့်ကြည့်ထားမည်ဖြစ်သည်။
• သင်သုံးနေသည့် ဖြည့်စွက်အဟာရများ အပင်ထွက်ပရဆေးများ အထူးသဖြင့် St. John’s wort အပင် သို့မဟုတ် tryptophan ပါလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
• သင့်၌ မကြာသေးခင်က နှလုံးရောဂါဖောက်ထားလျှင်၊ အတက်ရောဂါရှိလျှင်၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ သိုင်းရွိုက် သို့မဟုတ် နှလုံးရောဂါရှိလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပါ။
• ကိုယ်ဝန်ရှိပါက အထူးသဖြင့် မွေးရန် လအနည်းငယ်သာလိုတော့လျှင်၊ သို့မဟုတ် သင့်၌ ကလေးယူရန် နို့တိုက်ရန် အစီအစဉ်ရှိနေလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။ Escitalopram သောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ မွေးခါနီးတွင် သောက်မိပါက Escitalopram သည် မွေးကင်းစမျာတွင် မွေးပြီးနောက် ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါသည်။
• သွားဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအပါအဝင် တခြားခွဲစိတ်ကုသမှုများကို ခံယူမည်ဆိုပါက သွားဆရာဝန်သို့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အား သင် Escitalopram သောက်နေကြောင်းပြောပြပါ။
• Escitalopram သည် ငိုက်မျဉ်းစေတတ်သည်ကို သိထားပါ။ ဒီဆေးမှ သင့်အား သက်ရောက်မှုဘယ်လိုရှိသည်ကို မသိမချင်း ကားများ စက်များကို မမောင်းနှင်ပါနှင့်။
• ဤဆေးကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ငိုက်မျဉ်းခြင်းကို အရက်မှ ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသည်။
• Escitalopram သည် ထောင့်ပိတ်ရေတိမ်ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ဒီရောဂါသည် မျက်လုံးအတွင်းမှအရည်များ ရုတ်တရတ်ပိတ်မိသွားပြီး မျက်လုံးအပြင်သို့ မထွက်တော့ပဲ မျက်လုံးတွင်းဖိအားကိုများစေကာ အမြင်ကွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်) ဆေးမသောက်ခင် မျက်လုံးစစ်ဆေးပေးရန် ဆရာဝန်အားပြောပါ။ သင့်၌ ပျို့အန်တတ်ခြင်း၊ မျက်လုံးနာခြင်း၊ အမြင်ပြောင်းလဲခြင်းဥပမာ အလင်းကိုကြည့်လျှင် ရောင်စုံအကွင်းများမြင်ရခြင်း နှင့် မျက်လုံးအတွင်းအပြင် ရောင်ခြင်း နီခြင်းများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုချက်ခြင်းဆက်သွယ်ပါ။ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်——- ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ညဖက်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းခြင်းနှင့် လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
သင့်၌ဓါတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများဖြစ်သည့် အရေပြားတွင်အကွက်ထခြင်း၊ အဖီးထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှင်နှင့် လည်ချောင်းတို့တွင် ဖုထလာခြင်းများရှိပါက အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူပါ။
စိတ်ခံစားမှု သို့ အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်လန့်ခြင်း (panic attack)၊ အိပ်ရခက်ခြင်း တို့ကဲ့သို့ လက္ခဏာအသစ်များပေါ်လာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင်၊ သို့မဟုတ် ထကြွခြင်း၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ တက်ကြွလွန်ခြင်း (စိတ် သို့မဟုတ် ရုပ်)၊ ပို၍စိတ်ကျလာခြင်း သို့ သတ်သေလိုကြောင်း တွေးမိနေခြင်း သို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုခြင်းများရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
သင့်၌အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားလာရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
• ကြွက်သားများ အလွန်တောင့်ခြင်း၊ အပြင်းဖျားခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း သို့ မမှန်ခြင်း၊ ခြေလက်တုန်ခြင်း၊ မူးမေ့လဲချင်သလို ခံစားရခြင်း
• ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဟန်ညီညွှတ်မှုပျက်ပြားခြင်း သို့မဟုတ်
• ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မရခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာရှိခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ မူးမေ့လဲခြင်း၊ အသက်မျှင်းမျှင်းသာရှူခြင်း သို့ အသက်ရှူ ရပ် ရပ်သွားခြင်း
သိပ်မဆိုးသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အိပ်မရခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ လေလည်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းခြင်း၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ မြုံခြင်း သို့မဟုတ် လိင်စိတ်အထွတ်အထိပ်မရခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊ သမ်းဝေခြင်း၊ နားအူခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Escitalopram ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
• Tryptophan (တစ်ခါတစ်ရံ l-tryptophan ဟု ခေါ်သည်။)
• သွေးကျဲဆေးများဖြစ်သည့် warfarin၊ coumadin၊ jantoven၊
• ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ သက်သာဆေးများ – sumatriptan၊ rizatriptan နှင့် တခြားဆေးများ သို့မဟုတ်
• ဘိန်းပါသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ – fentanyl (သို့) tramadol
ဒီစာရင်းသည့် အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ တခြားသောဆေးများ – ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ အလွယ်တကူဝယ်ယူသောက်နိုင်သည့်ဆေး၊ ဗီတာမင်များ၊ အပင်ထွက်ပရဆေးများ အားလုံးတို့နှင့် escitalopram သည် ဓါတ်ပြုမှုရှိနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဓါတ်ပြုမှုများအားလုံးကို ဒီစာတမ်းတွင် ရေးမထားပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Escitalopram က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Escitalopram သည်သင်၏နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါတို့ရှိလျှင် ပိုအရေးကြီးသည်။
• နှလုံးခုန်စည်းချက်ပြဿနာများ (ဥပမာ – QT မျဉ်းရှည်ခြင်း “အီးစီဂျီတွင်တွေ့ရသည်”)
• သွေးတွင်း ပိုတက်စီယမ်နည်းခြင်း
• သွေးတွင်း မဂ္ဂနီစီယမ်နည်းခြင်း။ ၎င်းလူနာများတွင် ဒီဆေးအားမသုံးရပါ။
• Congestive heart failure (နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းပြီး ကိုယ်အင်္ဂါများတွင် အရည်စုပုံသောရောဂါ) ဒီဆေး၏ အမှုန်နှင့် ဆေးပြားပုံစံတွင် ဆိုဒီယမ်ပါပြီး ၎င်းသည် ထိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေသည်။
• အသည်းရောဂါများ (သည်းခြေပြွန်ပိတ်အသည်းရောင်ရောဂါ)
• Myasthenia gravis (ပြင်းထန်သော ကြွက်သားအားနည်းရောဂါ) – သတိနှင့်သုံးရမည်။ အခြေအနေအားပိုဆိုးစေနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Generalized Anxiety Disorder (စိုးရိမ်ပူပန်ရောဂါ)အတွက် ပုံမှန်လူကြီးသောက်ပမာဏမှာ
• ကနဦးပမာဏ – တစ်ရက်လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ် တစ်ကြိမ်၊ လိုအပ်ပါက တစ်ပတ်သောက်ပြီးလျှင် တစ်ရက်ကို ၂၀ မီလီဂရမ်သောက်နိုင်သည်။
• ထိန်းညှိပမာဏ – တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ၁၀ မှ ၂၀ မီလီဂရမ် သောက်ရန်
• အများဆုံးပမာဏ – တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ၂၀ မီလီဂရမ်
• ကနဦးပမာဏ – တစ်ရက်လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ် တစ်ကြိမ်သောက်ရန်၊ လိုအပ်ပါက တစ်ပတ်သောက်ပြီးလျှင် တစ်ရက်ကို ၂၀ မီလီဂရမ်သောက်နိုင်သည်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုများသောက်ရန် ပမာဏ
• လမ်းညွှန်းထားသည့်ပမာဏ – တစ်ရက်လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ် တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
ကလေးတွေအတွက် Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၂ နှစ်အောက် – ကလေးလူနာများ၌ အချိုးအစားဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုခြင်းအား အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်၌ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အသက် ၁၂ မှ ၁၇ အတွင်း –
• ကနဦးပမာဏ – တစ်ရက်လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ် တစ်ကြိမ်သောက်ရန်၊ လိုအပ်ပါက သုံးပတ်သောက်ပြီးလျှင် တစ်ရက်ကို ၂၀ မီလီဂရမ်သောက်နိုင်သည်။
• ဆက်လက်သောက်ရမည့်ပမာဏ (Maintenance dose) – တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ၁၀ မှ ၂၀ မီလီဂရမ် သောက်ရန်
အသက် ၁၈ နှင့် အထက် – လူကြီးသောက်ပမာဏနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Escitalopram (အက်စီတာလိုပရန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Escitalopram ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား – ၁၀ မီလီဂရမ်၊ ၂၀ မီလီဂရမ်
escitalopram သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
1. Escitalopram. https://www.drugs.com/mtm/escitalopram.html. 22/06/2016
2. Escitalopram (oral route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/escitalopram-oral-route/description/drg-20063707. 22/06/2016